» नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेको बढ्यै
नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेको बढ्यै
नेपालमा थप १ हजार ४५९ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण देखिएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशालामा १० हजार ३७५ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा थप १ हजार ४५९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
सोमवार १ हजार १७० जनामा कोरोना पुष्टि भएकोमा मंगलवार यो संख्या ह्वात्तै बढेको हो । हालसम्म कूल संक्रमितको संख्या ५६ हजार ७८८ र सक्रिय संक्रमितको संख्या १५ हजार ७७९ रहेको छ । प्रवक्ता डा. गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप १ हजार ६२ जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएको जानकारी दिए । यससहित नेपालमा डिस्चार्ज हुनेको कूल संख्या ४० हजार ६३८ पुगेको छ ।
काठमाडौंमा १० हजार ५८३, ललितपुरमा १ हजार २२६ र भक्तपुरमा १ हजार ११५ संक्रमित पुगेका छन् ।कोरोना भाइरस संक्रमणले थप ११ को मृत्यु भएको छ । तीमध्ये ४ महिला र ७ पुरुष छन् । यससहित नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३७१ पुगेको छ ।